आँचल छोडेर पलको को सँग लसपस ? : जोनी जेन्टलम्यान’ ट्रेलर – Karnalikhabar
पल शाह र आँचल शर्मा स्टारर चलचित्र ‘जोनी जेन्टलम्यान’ को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । योर स्टाईल पिक्चर्स र ए.जी. इन्टरटेनमेन्टको प्रस्तुतीमा रहेको चलचित्रको ट्रेलर केहिबेरअघि हाईलाईट्स नेपालको युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको हो ।
सार्वजनिक २ मिनेट ५० सेकेण्डको ट्रेलर प्रेम र द्धन्दलाई देखाउन खोजिएको छ । ट्रेलर हेर्दा आँचललाई छोडेर पलले अर्कैसँगको सम्बन्धमा रहेको पनि अनुमान लगाउने ठाउँ छ यद्यपी खास कुरा केहो भन्ने जान्नको लागि हलसम्म जानैपर्ने हुन्छ । भदौ ३० मा प्रदर्शनमा आउने चलचित्रमा नितिन चंदको निर्देशन रहेको छ । यम ओलीको निर्माणमा बनेको चलचित्रमा पल र आँचलको साथमा बिकास जोशी, जैना कँुवर, सन्तोष सिलवाल गिरी लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । महेश दवाडीको कथा तथा संवाद रहेको चलचित्रलाई रुपेश थापा र शरण उप्रेतीले खिचेका हुन् ।
यसअघि ‘नाई नभन्नु ल ४’ र ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ जस्ता सुपरहिट चलचित्र दिईसकेका पल शाहको यो तेश्रो चलचित्र हो भने नायिका आँचल शर्माको यो दोश्रो चलचित्र हो । यसभन्दा अघि आँचलले ‘नाई नभन्नु ल ४’ मा पलसँगै स्क्रिन सेयर गरेकी थिईन् । त्यो समयदेखी पल र आँचलको लभ अफेयरको चर्चा पनि मिडियामा आईरहेको छ यद्यपि उनीहरुले भने आफुहरु असल साथीमात्र भएको बताउँछन् ।
अघिल्लो - संविधान संशोधन प्रस्ताव : रातिसम्म बसेर भए पनि निष्कर्षमा पुगिने, कसले के भने ?
राजस्व अनुसन्धान कार्यालय अत्तरियाका दुई जना घुस्याहा कर्मचारी रंगेहात अख्तियारको फन्दामा - पछिल्लो